Taratasin�i Jean Aoka re marina e !
Arahabaina fa nahatratra ny taona ry Jean. Dia miarahaba anao mamaky izao taratasiko izao koa. Gaga aho raha nandre izato resakareo.
Poakaty no azoko hamehezana azy. Fa angaha ireny no nampanantenainareo anay efa-taona lasa ? Moa tsy hoe vary, menaka, fiainana, mora kokoa fa tsy hoe fotodrafitrasa ? Iza no nifanaraka taminao tamin’izany ry Jean ? Hanorina hoy ianao fa tsy handrava. Fa iza no nandrava voalohany teto ? Janoary isika izao ka miverina ato an-tsaiko ny Alatsinainy Mainty, ny 26 janoary 2009. Iza koa no nandrodana sy nahatonga izao fikorontanana tsy hita noanoa eto amin’ny firenena izao ? Sao mba hadinonareo aza ry Jean ny tantara sa hodianareo fanina fa ianareo anie no niavian’ny fanafintohinana e ! Izao dia mora ery ny miteny hoe hanorina sa handrava, hihavana sa hiady, hihemotra sa hiroso ? Aoka marina e !
Ny Banky Iraisam-pirenena sy ireo mpanao fanadihadiana anie ry Jean ka efa niteny fa nihemotra isika tato anatin’ny telo taona ary am-polony taona maro vao hiverina eo amin’ny toerana nisy tamin’ny 2008 e ! Ka iza izany ry Jean no tompon’andraikitra tamin’ny fihemorana ? Ireny monja ve no lesoka hitanareo ? Ary nahoana ny be baoty no isaorana manokana kanefa raha ny zavatra hita sy niainana dia tsy nahavita ny andraikiny izy ireo sa antony manokana no isaorana azy ireo ? Nahoana ny mpanao rugby koa no nomena tombony manokana ? Nahoana koa ireo mpihira no nomena tombony manokana ? Fa aiza ny an’ireo mpanabe izay ifotoran’ny maha firenena ny firenena, ny an’ireo mpitsabo raha tsy hiteny afa-tsy ireo aho ? Ny tantsaha izany moa dia toy ny tsy misy aminareo. Rehefa nihaino ilay kabary aho ry Jean dia tsy misy votoatiny fa averiko hoe poakaty ka nandiso fanantenana.